पट्गाउँवेशीका अग्निपीडितको पीडा : घर जलेर खरानी,देला कसले शरण ? – NamoBuddha Khabar
पट्गाउँवेशीका अग्निपीडितको पीडा : घर जलेर खरानी,देला कसले शरण ?
शनिबार, कार्तिक १५, २०७७ | २०:२७:५८ |
बेथानचोक–काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका ४ पट्गाउँंवेशीकी ४० वर्षिया सबिना लोप्चनलाई यो पालीको दशैं दशा बनेर आएजस्तै भयो ।
अष्टमीकै दिन सुख्खा माटो,काठ र ढुंगाले बनेको लोप्चनको घर क्षणभरमै आगोले खरानी बनायो,सिंगो परिवारलाई नै छाप्रोमा पुर्यायो । विद्युत प्रवाह सर्ट भएर घर जलेर खरानी भएपछि जस्ता र त्रिपालको छाप्रामा जीवन चलाउन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँ।
२ वर्षदेखी कतारमा रहेका उहाँका श्रीमान श्याम लामालाई यो खबरले भाउन्न बनायो। लामा पिडा पोख्नुहुन्छ “घर जलेर खरानी भो,घर जाउँ भनेको छुट्टी दिन मानिरहेको छैन,यदि गएदेखी आफ्नै पैसाले टिकट काटेर जानुपर्छ भन्छन् ,प्रयास गरें तर कोरोना कहरले मिलेन ।”
परिवारको आर्थिक अवस्था निम्न भएकाले नयाँ घर बनाउन नसक्ने स्थितिमा रहेको छ यो परिवार ।
समस्या सुनाउदै लामा भन्नुहुन्छ–“नयाँ घर बनाउने त अब सपना मात्रै हो,यो कोरोनाको महामारी र जाडो महिनामा कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्ता छ,कसले देला शरण ? कोही मानकारीलाई पर्खिरहेको छु ।”
आगलागीबाट लामाको तीन दाजुभाईको घर जलेर ध्वस्त भएको स्थानीय प्रहरी चौकीले स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीका अनुसार श्याम लामा,बुद्ध लामा र सुरेस लामा तिनै दाजुभाइको घर जलेर नष्ट भएको हो ।
“कतिबेला हावा हुरी आएर पाल च्यातिदिने र जस्ता उडाउने ठेगान छैन,” अर्का अग्नीपीडित बुद्ध लामाले भन्नुभयो–“कहिले हामीले नयाँ घर बनाएर शान्तिसँग बस्न पाउने हो ।” आफूहरुलाई अहिले बस्नका लागि निकै समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो ।
शरीरको एक सरो लुगा बाहेक घरका साथै अन्न र सम्पुर्ण लत्ताकपडा समेत जलेको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।
यो विपत्तीमा सहयोग गर्न इच्छुक महानुभावले पीडित ( सबिना लोप्चन ९८४९३४२०३६,बुद्ध लामा ९८४३०४४२७२,सुरेश लामा ९८१३३२५८१५) लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।